Basile: Messi waa mucjiso xataa haddii aanu koob aduun qaadin
HomeWararka MaantaBasile: Messi waa mucjiso xataa haddii aanu koob aduun qaadin
Tababarihii hore ee xulka qaranka Argentina, Alfio Basile ayaa sheegay in Lionel Messi aanu u baahnayn inuu koobka aduunka ku guuleysto si uu u sii ahaato Mucjisada kubada cagta.
Messi ayaa haysta guulaha lix koob oo horyaalka La Liga ah, Afar jeer oo abaal marinta xidiga aduunka ee Ballon d’Or ah, Saddex Champions League iyo laba koob oo horyaalka naadiyada caalamka ee, Fifa Club World Cups ah. Intaa waxaa u dheer, ciyaaryahankan 27 jirka ah inuu yahay laacibka ugu goolasha badan taariikhda labada horyaalka ee ka yurub ’Champions League iyo La Ligaha Spain.
Si kastabase ha ahaatee, Wali waxaa jira in dadka qaar aaminsan yihiin in Messi u baahan yahay inuu koob aduun qaado si uu u noqdo laacibkii ugu fiicnaa ee soo mara aduunka, kaas oo ay ugu dhawayd koob aduunkii 2014 ee lagu qabtay Brazil oo uu xulkiisa Argentina keenay Finalka , ciyaartaasna Germany ay 1-0 kaga guuleysteen oo sidaas Jarmalku ku qaadeen koobkii.
Basile, Wallow uu aaminsan yahay, in koobka aduunka oo lagu guuleystaa ay wax weyn tahay laakiin marka la eegayo Messi, aanay ahayn wax sidaas u weyn oo lagu xidhi karo.
“Mushkilada Messi haysataa waxa weeye, in dadka qaar ku xidhaan inuu ku guuleysto koob aduun, maxaa yeelay waxay u malaynayaan in markaas ka dib uun uu noqon karo ciyaaryahan ka sii fiican heerka uu hadda joogo,” Ayuu tababarihii hore ee Argentina ku yidhi waraysi uu siiyey warfidiyaha Perform.
“Laakiin in kastoo aanu koob aduun ku guuleysan, hadana Messi waa Mucjiso ama Mar la Arag.”
Manchester United Oo Afar Gool Oo Ay 3 Ku Dhalisay 4 Daqiiqo Ku Xasuuqday Swansea City
‘Waan jeclaa waligayba Zidane, laakiin waxaan filayaa inuu ku fashilmayo Madrid’